မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - AOOD Technology Limited
စလစ်ကွင်းနှင့် rotary union တို့၏ခြားနားချက်ကဘာလဲ။
စာရွက်ကွင်းများနှင့် Rotary Union နှစ်ခုစလုံးသည်မီဒီယာကိုအလှည့်အပြောင်းမှအစရွေ့လျားသောအပိုင်းသို့လွှဲပြောင်းရာတွင်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်စလစ်ကွင်း၏မီဒီယာသည်စွမ်းအား၊ အချက်ပြမှုနှင့်အချက်အလက်ဖြစ်သည်။ အလှည့်ကျသမဂ္ဂများ၏မီဒီယာသည်အရည်နှင့်ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သည်။
ဘယ်လို AOOD လျှပ်စစ်လှည့်ထုတ်ကုန်များ၏အာမခံကော?
အက္ခရာတင်သောကွင်းများ မှလွဲ၍ AOOD သည်လျှပ်စစ်လည်ပတ်သည့်ထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက်တစ်နှစ်အာမခံပါသည်။ အကယ်၍ မည်သည့်စက်ရုံသည်သာမန်အလုပ်ခွင်အခြေအနေတွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်မလုပ်ပါက AOOD သည်၎င်းကိုအခမဲ့ထိန်းသိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်အစားထိုးခြင်းပြုလုပ်လိမ့်မည်။
Circuit အရေအတွက်၊ current နှင့် voltage, rpm၊ size limit သည်မည်သည့် AOOD slip ring ပုံစံကိုလိုအပ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အမှန်တကယ်လျှောက်လွှာကို (တုန်ခါမှု၊ စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်ရသောအချိန်နှင့်အချက်ပြအမျိုးအစား) ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးသင့်အတွက်တိကျသောဖြေရှင်းချက်ကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်သည်ဘာကြောင့် AOL TECHNOLOGY LIMITED ကိုကျွန်ုပ်တို့၏လက်စွပ်ဖက်အဖြစ်ရွေးချယ်သင့်သနည်း။ မင်းရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲ?
AOOD ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဖောက်သည်များအားကျေနပ်စေရန်ဖြစ်သည်။ ကန ဦး ဒီဇိုင်း၊ ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ အထုပ်နှင့်နောက်ဆုံးပို့ခြင်းစသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုအမြဲပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်အချိန်တိုအတွင်းအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များကိုရရှိနိုင်ရန်သေချာသည်။
AOOD သည်စလစ်ကွင်း ၀ င်ခြင်းမှအချက်အလက်များဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမှမည်သို့ကာကွယ်မည်နည်း။
AOOD အင်ဂျင်နီယာများသည်အောက်ပါအချက်များမှအချက်ပြမှုမှကာကွယ်ရန်တားဆီးလိမ့်မည်။ စလစ်ကွင်း၏အတွင်းပိုင်းမှအချက်ပြကွင်းများနှင့်အခြားအင်အားကြီးကွင်းများ၏အကွာအဝေးကိုတိုးမြှင့်။ ခ။ အချက်ပြမှုများကိုလွှဲပြောင်းရန်အထူးဒိုင်းကာဝါယာကြိုးများကိုသုံးပါ။ ဂ။ အချက်ပြကွင်းများအတွက်အပြင်ဘက်အကွယ်အကာထည့်ပါ။
အမှာစာပြီးတာနဲ့ AOOD ပို့ဆောင်ချိန်ဘယ်လောက်ရမလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပုံမှန်စလစ်ကွင်းများအတွက်သင့်တော်သောပမာဏရှိသည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ပတ်အတွင်းကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်းအချိန်သည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ စလစ်ကွင်းအသစ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂ ပတ်မှ ၄ ပတ်အထိလိုအပ်သည်။
များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် installation shaft နှင့် screw ကိုတပ်ဆင်ပြီးသင်လိုအပ်ပါကသင်၏တပ်ဆင်မှုနှင့်ကိုက်ညီရန်အနားကွပ်ကိုထည့်နိုင်သည်။
dual-band 2-axis digital digital satellite satellite antenna system အတွက်သင့်လျော်သော slip ring ring solutions ကိုအကြံပေးနိုင်ပါသလား။
AOOD သည်ပင်လယ်အင်တင်နာစနစ်များနှင့်လမ်းအင်တင်နာစနစ်များအပါအဝင်အင်တင်နာစနစ်များအတွက်စလစ်ကွင်းအမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း signal ကိုလွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်ပြီးအချို့သည်မြင့်မားသော protection degree လိုအပ်သည်။ ဥပမာ IP68 ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ထိုသို့ပြုကြပြီ။ သင်၏အသေးစိတ်စလစ်ကွင်းကွင်းလိုအပ်ချက်များအတွက် AOOD ကိုဆက်သွယ်ပါ။
နည်းပညာအသစ်များတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှအထူးအချက်ပြမှုများကိုလွှဲပြောင်းရန်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောစလစ်ကွင်းများကိုလိုအပ်သည်။ မည်သည့်အချက်ပြမှုကို AOOD စလစ်ကွင်းမှလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သနည်း။
နှစ်ပေါင်းများစွာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွေ့အကြုံများရှိသည့် AOOD စလစ်ကွင်းများကိုဗီဒီယိုအချက်ပြ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗွီဒီယိုအချက်ပြ၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့်၊ PLD ထိန်းချုပ်မှု၊ RS422၊ RS485၊ Inter Bus၊ CanBus, Profibus, Device Net၊
ငါ 1080P နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံသေးငယ်တဲ့အတွက်အခြားဘုံအချက်ပြလိုင်းများကိုလွှဲပြောင်းရန် slip ring ကိုရှာဖွေနေသည်။ သင်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုပေးနိုင်မလား?
AOOD သည် IP ကင်မရာများနှင့် HD ကင်မရာများအတွက် HD slip ring များကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး HD signal နှင့်သာမန်အချက်ပြနှစ်မျိုးလုံးကိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောလက်စွပ်ဘောင်အတွင်းပြောင်းနိုင်သည်။
သင့်တွင် 2000A သို့မဟုတ်အထက်မြင့်သောလျှပ်စစ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည့်အရာရှိပါသလား။
ဟုတ်တယ်၊ AOOD လျှပ်စစ်လှည့်ကော်နက်ရှင်များသည်နောက်ခံအရောင်ကိုလွှဲပြောင်းရာတွင်အသုံးပြုသည်။ # f0f0f0; high current ။
စလစ်ကွင်းသည် IP66 ကဲ့သို့သောမြင့်မားသောကာကွယ်မှုဒီဂရီလိုအပ်ပါက။ အဆိုပါ torque ကြီးမားဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်အထူးကုသမှုဖြင့် AOOD သည် IP66 သာမကသေးငယ်သည့် torque ကိုစလစ်ကွင်းတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကြီးမားသောအရွယ်အစားရှိသည့်လက်စွပ်ပင်ကျွန်ုပ်တို့က၎င်းကိုပိုမိုမြင့်မားသောကာကွယ်မှုနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေသည်။
ROV စီမံကိန်းအတွက်ပင်လယ်လှိုင်းအောက်တွင်တစ်ခုတည်းသောဖိုက်ဘာမှန်ဘီလူးနှင့်စွမ်းအင်ကိုထုတ်လွှင့်နိုင်သော rotary joints နှစ်စုံလိုအပ်သည်။ သင်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုပေးနိုင်မလား?
AOOD သည် ROVs နှင့်အခြားအဏ္ဏဝါဆိုင်ရာ application များအတွက် rotary joints များစွာကိုအောင်မြင်စွာကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် fiber optic rotary joint ကိုလျှပ်စစ်စလစ်ကွင်းထဲသို့ ဆက်သွယ်၍ fiber optic signal, power, data နှင့် signal ကိုစုံလင်သောစုစုပေါင်းတစ်ခုအတွင်းသို့ပို့လွှတ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးပြုမှုအခြေအနေကိုအပြည့်အ ၀ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည်။ စလစ်ကွင်း၏သံမဏိနှင့်ပြုလုပ်ထားသောဖိအားပေးမှုနှင့်ကာကွယ်မှုအတန်းအစား IP68 ကိုလည်းအသုံးပြုမည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်စက်ရုပ်စီမံကိန်းကိုဒီဇိုင်းဆွဲနေသည်။ ကေဘယ်ကြိုးပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်စက်ရုပ်လည်ပတ်သည့်အဆစ်အချို့လိုအပ်သည်။ ၎င်းအတွက်သင်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။
စက်ရုပ်အသုံးပြုခြင်းတွင်စလစ်ကွင်းကိုစက်ရုပ်ဆုံလည်စက်သို့မဟုတ်စက်ရုပ်စလစ်ကွင်းဟုလူသိများသည်။ ၎င်းကို base frame မှစက်ရုပ်လက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနသို့ signal နှင့် power ကို transmit လုပ်တယ်။ ၎င်းတွင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်။ စာရေးကိရိယာတစ်ခုသည်စက်ရုပ်လက်မောင်းပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီးတစ်ခုသည်စက်ရုပ်လက်ကောက်ဝတ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ စက်ရုပ်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြင့်စက်ရုပ်သည်ကြိုးမဲ့ပြသနာများမရှိဘဲ ၃၆၀ လှည့်လည်ခြင်းကိုရရှိနိုင်သည်။ စက်ရုပ်၏သတ်မှတ်ချက်များအရစက်ရုပ် rotary အဆစ်များသည်ကျယ်ပြန့်သည်။ များသောအားဖြင့်စက်ရုပ်အပြည့်အဝစက်ရုပ်စလစ်ကွင်းများလိုအပ်သည်။ ယခုအချိန်ထိကျစ်လျစ်သိပ်သည်းသောဆပ်ကွင်းများ၊ ကျစ်လစ်သောကွင်းများ၊ ကိတ်မုန့်ချပ်ပြားများ၊ ဖိုင်ဘာမှန်ဘီလူးအလှည့်အဆစ်များ၊
သင်၏စလစ်ကွင်းပတ် ၀ န်းကျင်သည်ကောင်းသောအသံဖြစ်သော်လည်းအဘယ်စမ်းသပ်မှုများကိုသင်ပြုလုပ်မည်နည်း။ သင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ
ထိုကဲ့သို့သော AOOD သေးငယ်သောကျစ်လစ်စလစ်ကွင်းများကဲ့သို့သောဘုံစလစ်ကွင်းဆက်တပ်ဆင်မှုများအတွက်လည်ပတ်မှုဗို့အားနှင့်လက်ရှိ၊ အချက်ပြမှု၊ torque၊ လျှပ်စစ်ဆူညံမှု၊ လျှပ်ကာမှုခံနိုင်ရည်၊ စစ်ရေးအဆင့်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းကဲ့သို့သောအထူးမြင့်မားသောလိုအပ်သောစလစ်ကွင်းများအတွက်ရေအောက်ယာဉ်များ၊ ကာကွယ်ရေးနှင့်စစ်ရေးနှင့်လေးလံသောစက်ယန္တရားများစလစ်ကွင်းများတွင်အသုံးပြုမည်ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်မှုထိတ်လန့်မှု၊ အပူချိန်စက်ဘီး၊ အပူချိန်မြင့်ခြင်း၊ တုန်ခါမှု၊ စိုထိုင်းဆ၊ signal interference၊ မြန်နှုန်းမြင့်စစ်ဆေးမှုများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဤစမ်းသပ်မှုများသည်အမေရိကန်စစ်ဘက်စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသောစစ်ဆေးမှုအခြေအနေများကိုဖောက်သည်များကပြုလုပ်လိမ့်မည်။
မင်းမှာဘာ HD-SDI ချော်လဲ? သူတို့အများကြီးလိုအပ်တယ်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် 12way, 18way, 24way နှင့် 30way SDI slip rings ရှိသည်။ သူတို့ကကျစ်လစ်သိပ်သည်းဒီဇိုင်းနှင့် install လုပ်ဖို့လွယ်ကူဖြစ်ကြသည်။ ၄ င်းတို့သည် high definition ဗီဒီယိုများ၏ signal ချောချောမွေ့မွေ့ကိုသေချာစေပြီး TV နှင့် film applications များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။